Kenya Oo Codsatay In Madaxweynaha Maxkamadda Icj Laga Saaro Dhageysiga Kiiska Badda – somalilandtoday.com
Kenya Oo Codsatay In Madaxweynaha Maxkamadda Icj Laga Saaro Dhageysiga Kiiska Badda
(SLT-Nairobi)-Bishan September 9-keeda dalka Soomaaliya waxaa uu dood iyo difaac la hortagidoonaa Maxkamadda Cadliga adduunka ee ICJ oo ku taalla dalkan Holland, iyadoo lagu wado inay dib uga bilaamato dhegeysiga kiiska Badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Dowladda Kenya ayaa war ka soo saartay kiiska Badda ee kala dhexeeysa Soomaaliya, iyadoo Codsatay in dhageysiga kiiska Badda laga saaro Garsoore Cabdi Qawi Axmed Yuusuf oo ah Madaxweynaha Maxkamadda ICJ, isla markaana ah Nin Soomaali.
Hay’add la magac baxay PAF oo sheegtay inay u doodo arrimaha Geeska iyo Bariga Afrika ayna Madax ka yihiin dad Kenyan ah ayaa xustay in Kenya ay dooneyso in garsoore Cabdi Qawi laga reebo dhegeysiga kiiska Badda ee ka dhexeeya Soomaaliya.
Sidoo kale Hay’adda PAF oo uu Guddoomiye uu ka yahay David Matsanga, isla markaana u dhashay Kenya ayaa waxaa uu sheegay Cabdi Qawi aanu si dhex dhexaad ah u geli karin kiiska Badda ee labada dal ayna niyaddiisu la jirto Soomaaliya, sidoo kalena dhowr jeer oo hore fagaare ka sheegay in uu jecel yahay Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Guddoomiye David Matsanga ayaa dowladda Kenya ugu baaqay in ayna ka qeyb gelin dhegeysiga kiiskan badda ee horyaalla Maxkamadda cadaalada adduunka ee ICJ.